I-FAQs-iQuanzhou Stamgon yokuthengisa Co, Ltd.
Siyabuxabisa ubumfihlo bakho
Siyabuxabisa ubumfihlo bakho. Asithengisi, asiqeshisi okanye siboleke nayiphi na into eyaziwayo (kubandakanya idilesi ye-imeyile, inombolo yefowuni, njl njl) ngokubhekisele abathengi bethu nakubani na. Asiyi kukucela ngomnxeba okanye ngeposi. Nalo naluphi na ulwazi osinike lona luya kusetyenziswa ngokufanelekileyo, lubanjwe ngononophelo nangokhuseleko olukhulu, kwaye aziyi kusetyenziswa ngeendlela ongakhange uvume ngazo.
usebenzisa ukupakisha ngokulula, iiseti zonke ezipakishwe kwingxowa yeplastiki, okanye iiseti ezili-10 kwisingxobo esikhulu seplastiki, okanye esenziwe ngokwezifiso.
Nceda ujonge icandelo "lesayizi" kwimveliso nganye ngeenkcukacha ezithe kratya. Malunga netshathi yesayizi, nceda undwendwele: itshathi
Ngaba uyamkela imeko ye-OEM kwaye luphi ubuncinci ubuncinci bemeko ye-OEM?
Ewe, imeko ye-OEM yamkelekile kwaye ubuncinci bobungakanani buxhomekeke kwizinto ozi-odayo. Kwaye nceda uthumele imifanekiso ecacileyo ecacileyo ofuna ukusinika yona, siya kuyithumela kubaYili bethu, sakuba sinayo le nto, sinokuvelisela yona ngexesha. Ukuba akukhange kubenjalo, siya kukukhangela, kwaye emva koko senze imveliso. kwaye uthumele iisampuli kunye nezinye izinto eku-odola kuqala ukuze ukwazi ukukhangela.
Sisebenzisa ilaphu elisemgangathweni ophezulu elinokulayishwa ngokulula kwiisuti zokubhukuda, kunye ne-100% i-polyester yeebhulukhwe ezimfutshane zolwandle, okanye zenziwe ngokwezifiso.
Malunga nexabiso kunye nentlawulo
Ungasithumela umyalezo okanye ubuze, usitshele imodeli hayi kwiimveliso ozithandayo kunye nobungakanani obuceliweyo, emva koko siya kukuthumela iikowuteshini.
Sinikezela ngezaphulelo zobungakanani obahlukeneyo, nceda uqhagamshelane nemfuno yakho yobungakanani.
Intlawulo yethu kunye nolwazi lokuhlawulwa kwebhanki.
Samkela amakhadi etyala, iTransfer yaseBhanki. Umyalelo omncinci okanye isampulu, samkela intlawulo kwi-intanethi ngqo.
Ukuba ufuna ukundibhatala ngeBhanki, nceda unxibelelane nathi.
Malunga nexesha lokuhlawula
Samkela ukuhlawulwa kwangoko kwe-Intanethi ngamakhadi etyala. Intlawulo ngokubanzi kufuneka yenziwe ngaphakathi kweentsuku ezi-3 zoku-odola. Ukuba kukho nasiphi na isizathu sokulibazisa intlawulo, nceda unxibelelane nathi kuqala. Enkosi.
Leliphi elona nani lincinci loku-odola?
A: yesitokhwe sethu, i-MOQ iya kuba zi-10 ii-pcs kwisitayile / ngasinye kumbala.
Kwaye kuyilo oluhlengahlengisiweyo, i-MOQ: iziqendu ezingama-200 ngesitayile / ibala ngalinye.
A: Ewe, kodwa kuya kufuneka uhlawule isampulu kunye neendleko zekhuriya. Ungasithumela iimfuno ezichaziweyo zesampula ukuze sikwazi ukujonga iindleko kunye nexesha lesampulu, emva kokufumana intlawulo yakho, siya kucwangcisa i-odolo yakho yesampula kwangoko.
Ungongeza uphawu lwethu kwiimveliso?
A: Ewe kunjalo. Sinikezela ngenkonzo yokongeza uphawu lwabathengi, nceda uthumele umzobo wobuntoyimigca kwifomathi yePD okanye ye-AI.
Siza kuthumela ngepakethi ye-EMS / DHL / UPS / TNT yamazwe aphesheya, okanye siya kuhamba ngolwandle ukuba i-cubage yeodolo ingaphezulu kwe-1cbm, kuxhomekeka kubungakanani.
Zithatha iintsuku ezingakanani?
Ngokubanzi kuthatha iintsuku zomsebenzi ezi-3-4 kwilizwe liphela nge-UPS, kunye neentsuku ezi-5 zokusebenza nge-EMS (ngaphandle kweRussia), kunye neentsuku ezingama-4-5 zokusebenza yiTNT / DHL kuxhomekeka kwindawo ohlala kuyo.
Malunga nexesha lokuhanjiswa
Xa ulungiselela ukubeka iodolo, siya kuqwalasela iodolo yakho kuqala, size ke sithumele i-invoice kuwe kwiiyure ezingama-24. Kwaye kwizinto ezigciniweyo siya kusihambisa kwiintsuku ezisi-7, ngaphandle koko siya kuqinisekisa ixesha lokuhanjiswa kunye nawe.
Ndixelele iindleko zokuhambisa ngaphambi koku-odola
Iindleko zokuhambisa zixhomekeke kwisisindo, ivolumu kunye nendlela yokuhambisa (i-EMS, DHL, TNT, UPS, okanye uhambo lwaselwandle) kunye nelizwe lokuya. Ke kunzima kuthi ukubhengeza imali yokuthumela ngaphambi kokuba ubeke iodolo （ ubunzima bomnatha weqhekeza elinye lebhayithi imalunga ne-0kk, kodwa ubunzima bomthamo bu malunga ne-0.5kg / pc). Kwaye ungayikhetha inkampani yokuhambisa oyithandayo kwaye siya kujonga konke okubonisiweyo kwaye sikwacebe eyona ndlela ilungele wena.
Malunga neMbuyiselo kunye neMigaqo
Sincamathisela ukubaluleka kumgangatho weemveliso kunye neenkonzo, ngoko ngaphambi kokuthumela ipasile, kufuneka sijongise imveliso kabini kwakhona kwaye siyipakisha ngokwethu.
Ukujongana njani, ukuba into inesiphene?
Siyaxolisa ukuba le nto inesiphene, kwaye siya kujongana nengxaki enjalo. Sifuna uncedo lwakho.
Okokuqala: Ukuba into inesiphene, nceda usazise kwiintsuku ezi-3 zokusiwa.
Okwesibini: nceda udubule umfanekiso wento unesiphene, emva koko usithumele lo mfanekiso nge-imeyile, ukuze ndibangenise kuMlawuli wezobuchwephesha, emva kokujonga kunye nokuvuma, siyakongeza entsha kwi-oda yakho elandelayo simahla.
Inkqubo yokubuyisa okanye yokucima
Ukuze sikwazi ukubonelela ngeenkonzo ezifanelekileyo ngakumbi zabathengi, samkela ukubuyiswa kunye nokucinywa kwe-odolo kungaphelanga iiyure ezingama-24.
Ngaphezu kwako konke, enkosi ngokubeka iodolo kwiwebhusayithi yethu www.stamgon.com . Ukoneliseka kwakho kuya kuba ngowona mthombo wethu wokukhuthaza.
Sibeka iphepha ukuvumela ukuba ufumane indlela ehambelanayo yokulandela umkhondo yenkampani ngokukhawuleza kwaye ndiyathemba ukuba inokukunceda ugqibezele ukulandela ukulandelela komyalelo.
Kuthetha ukuba sikhuphe iodolo yakho xa usifumana inombolo yokulandelela. Ungajonga imeko yephakheji yakho kwi- iphepha lokulandelela . Nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane nathi ngokukhululekileyo!
I-PS: Ngamanye amaxesha bonisa ukulibaziseka ekuhlaziyeni ulwazi kwiwebhusayithi yabo. Ke nceda yiba nomonde kwaye uyihlole emva kwexesha elithile. Ukuqonda kwakho kuya kuxatyiswa kakhulu, enkosi!